प्रधानसेनापति ट्रफी खेलकूद प्रतियोगिता, २०७७ शुरु - Rajmarga
काठमाडौं । स्वास्थ्यका लागि खेलकूद, राष्ट्रका लागि खेलकूद नारासहित प्रधान सेनापति ट्रफी खेलकूद प्रतियोगिता, २०७७ आजदेखि शुरु भएको छ ।
नेपाली सेनाको भद्रकालीस्थित मुख्यालय जङ्गी अड्डामा शुरु भएको उक्त प्रतियोगिताको नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले उद्घाटन गर्नुभयो । उद्घाटनको दिन आज पुरुष र महिलातर्फ १०० मिटर तथा आठ सय मिटरतर्फका खेल सम्पन्न भएका छन् ।
पुरुष १०० मिटर दौडमा मध्यपश्चिम पृतनाका प्यूठ धर्मेन्द्र सिंह पहिलो हुनुभयो । उहाँले सो दौड १० दशमलव ७८ सेकेन्डमा पूरा गर्नुभयो । सो स्पर्धामा मध्य पृतनाका सिपाही दिपक विश्वकर्मा दोस्रो तथा १४ नम्बर बाहिनी अड्डाका सिपाही दिवश विष्ट तेस्रो हुनुभयो । विश्वकर्माले सो दौड १० दशमलव ८२ सेकेण्ड तथा विष्टले १० दशमलव ८२ सेकेण्डमा पूरा गर्नुभयो ।
यस्तै महिला १०० मिटर दौडतर्फ १६ नम्बर बाहिनी अड्डाकी गनर करुणा लामिछाने पहिलो हुनुभयो । उहाँले सो दौड १३ दशमलव ४३ सेकेन्डमा पूरा गर्नुभयो । सो स्पर्धामा पूर्वी पृतनाकी सिपाही मनिषा विक दोस्रो तथा मध्य पृतनाकी सिपाही विपना थारु तेस्रो हुनुभयो । विकले उक्त दौड १३ दशमलव ५९ सेकेण्ड तथा थारुले १३ दशमलव ६७ सेकेण्डमा पूरा गर्नुभयो ।
यसैगरी पुरुष आठ सय मिटर दौडमा उपत्यका पृतनाका सिपाही सुदीप शाह पहिलो हुनुभयो । उहाँले सो दौड दुई मिनेट शून्य दशमलव ३३ सेकेण्डमा पूरा गर्नुभयो । उक्त स्पर्धामा सुदूरपश्चिम पृतनाका सिपाही सुनिल सुनार दोस्रो तथा मध्य पृतनाका सिपाही बुद्धराम तामाङ तेस्रो हुनुभयो । सुनारले सो दौड दुई मिनेट शून्य दशमलव ६२ सेकेण्ड तथा तामाङले दुई मिनेट एक दशमलव १४ सेकेण्डमा पूरा गर्नुभयो ।
यस्तै महिला आठ सय मिटर दौडमा १६ नम्बर बाहिनी अड्डाकी गनर राधिका श्रेष्ठ पहिलो हुनुभयो । उहाँले सो दौड दुई मिनेट २८ दशमलव १९ सकेण्डमा पूरा गर्नुभयो । उक्त स्पर्धामा मध्य पश्चिम पृतनाकी सिपाही निर्मला केसी दोस्रो तथा उपत्यका पृतनाकी सिपाही गीता विक तेस्रो हुनुभयो । उक्त दौड केसीले दुई मिनेट २८ दशमलव ७९ सेकेण्डमा तथा विकले दुई मिनेट २८ दशमलव ९८ सेकेण्डमा पूरा गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रदर्शनी खेलका रुपमा समावेश गरिएको आर्चरीतर्फ रोशन नगरकोटी उत्कृष्ट घोषित हुनुभयो । उद्घाटन समारोहमा स्वागत मन्तव्य राख्नुहुँदै नेपाली सेनाका उपरथी निरञ्जनकुमार श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण गत भदौमा सञ्चालन हुनुपर्ने प्रतियोगिता ढिला भएको जानकारी दिनुभयो । आगामी माघ २ गतेसम्म सञ्चालन हुने सो प्रतियोगितामा ८ पृतना, ५ मद्दती बाहिनी, एक विशेष फौज बाहिनी तथा यान्त्रिक निर्देशनालय गरी कूल १५ टोलीको सहभागिता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, सुटिङ, बास्केटबल र फुटबल खेलमा महिला र पुरुष खेलाडीले आ आफ्ना खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । सबै खेल सेनाको छाउनी, भद्रकाली र लगनखेल मैदानमा सञ्चालन हुनेछन् । सेनाले २०६५ सालदेखि प्रधान सेनापति ट्रफी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ ।
सेनाका खेलाडीले राष्ट्रिय र अन्तरराष्टिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै आएको जानकारी दिँदै उपरथी श्रेष्ठले त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले हालै एशियाली फुटबल महासङ्घ ९एएफसी० को क्लब लाइसेन्स प्राप्त गर्न सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । उक्त लाइसेन्स प्राप्त गर्ने त्रिभुवन आर्मी नेपालको एउटा मात्र क्लब हो । रासस
Previous post:कोरोनाका कारण ६०० पत्रकारको मृत्यु
Next post:धादिङमा एकीकरण पदयात्रा : पुस २७ मा सिंहदरबार आउने
म्यानचेस्टर युनाइटेड इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा
प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट छनोटमा काठमाडौँ र ललितपुर विजयी
रत्ननगर नगरपालिकाको रङ्गशाला निर्माणका लागि १० लाख सहयोग
विश्वकप फुटसल : नेपाल तीनै खेलमा पराजित
सन्दिपले दिल्लीमा किन लगाउन पाएनन् २५ नम्बरको जर्सी ? कसले लगाउँछ यो नम्बर ?
प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट आजदेखि , यस्तो छ आजको प्रतिस्पर्धा
विश्वकप क्रिकेटः पाकिस्तानमाथि अष्ट्रेलियाको जित, आज भारत र न्युजिल्याण्ड खेल्दै